Baladiyaam - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Palladium)
Baladiyaam (ingiriis: Palladium) astaanta (Pd) waa curiye kimiko oo tirada atomkiisu tahay afartan-iyo-lix (46). Curiyaha Baladiyaam waa bir ka tirsan Transitional Metalska ee guruubka 10aad iyo heerka 5aad ee Diwaanka Curiye iyo guruubka d-block.
Curiyahan Baladiyaam waa bir leh midabka naxaasta oo cadaan xiga, taasi oo u helay saynisyahan William Hyde Wollaston sanadkii 1803dii asagoo ugu magac daray sheekooyinkii hore ee Giriiga Pallad.
Isku dhisyada laga sameeyo curiyahan Baladiyaam waxaa loo isticmaalaa in laga sameeyo sheeyo ku jira mashiinka gaadiidka, samayska elektarooniga, qeybo ka mid ah daawooyinka, qalabka dhakhtarka ilkaha iyo waxyaabo kale.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Baladiyaam&oldid=142338"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 May 2015, marka ee eheed 12:54.